အောင်မြင်ခြင်း နှင့် ရှုံးနိမ့်ခြင်း | Rev.U Min Lwin
Posted by ဦးမင်းလွင် on 19/05/2013
Posted in: တရားဟောချက်.	Tagged: ရှုံးနိမ့်, အောင်မြင်.	1 Comment
ထွက်မြောက် ရာကျမ်း ၁၇း၁-၇ တွင်
ဣသရေလ အမျိုးသား ပရိသတ် အပေါင်းတို့သည်၊ ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူ သည်အတိုင်း၊ သိန်တော ထဲက ထွက်၍ ခရီးသွား သဖြင့်၊ ရေဖိဒိမ် အရပ်၌ စားခန်းချကြ၏။ ထိုအရပ်၌ လူများ ​သောက်ဘို့ရာ ရေမရှိ။ ထိုကြောင့် လူများတို့က၊ သောက်ဘို့ရေပေးပါဟု ဆို၍ မောရှေကို ရန်တွေ့ကြ၏။ မောရှေကလည်း၊ ငါ့ကို အဘယ်ကြောင့် ရန်တွေ့ ကြသနည်း။ ထာဝရဘုရားကို အဘယ်ကြောင့် စုံစမ်းကြ သနည်းဟု ဆိုလေ၏။ လူများတို့သည် ရေငတ်၍ မောရှေကိုအပြစ်တင်မြည်တမ်းလျက်၊ ငါတို့မှစ၍ သားသမီးတိရစ္ဆာန်တို့ကို အဝတ် ထား၍ သတ်ခြင်းအလို့ငှါ၊ အဲဂုတ္တုပြည်မှ အဘယ်ကြောင့် ဆောင်ခဲ့သနည်းဟု ဆိုကြ၏။ ထိုအခါမောရှေ သည် ထာဝရ ဘုရား အားအော်ဟစ်၍၊ ဤလူတို့အား အကျွန်ုပ်သည် အဘယ်သို့ပြု ရပါမည်နည်း။ အကျွန်ုပ်ကို ခဲနှင့် ပစ်လုကြပါပြီဟု လျှောက်လေ၏။ ထာဝရ ဘုရားက လည်း၊ လူများရှေ့ သို့သွား၍ ဣသရေလအမျိုး အသက်ကြီး သူတို့ကိုခေါ်လော့။ မြစ်ကိုရိုက်သော သင်၏ လှံတံကိုကိုင် လျက်၊ ဟောရပ်အရပ်သို့သွားလော့။ ထိုအရပ်၌ရှိသော ကျောက်ပေါ်တွင် သင့်ရှေ့မှာ ငါရပ်နေမည်။ သင်သည် ထိုကျောက်ကို ရိုက်ရမည်။ လူများသောက်ဘို့ ထိုကျောက်ထဲကရေထွက်လိမ်မည် ဟုမောရှေအား မိန့်တော်မူ၏။ မောရှေသည်လည်း ဣသရေလ အမျိုးအသက်ကြီးသူတို့ရှေ့မှာ ထိုသို့ပြုလေ၏။ ဣသရေလအမျိုးသားတို့က၊ ထာဝရ ဘုရားသည် ငါတို့တွင် ရှိသလော မရှိလောဟု ထာဝရဘုရားကို စုံစမ်း၍ ရန်တွေ့သော အကြောင်းကြောင့်၊ ထိုအရပ်ကို မဿာနှင့် မေရိဘဟု သမုတ်သတည်း။
ဣသရေလ လူမျိုးများ တောထဲတွင် လှည့်လည်နေရသော အချိန်က ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ လှည့်လည်နေရင်း မောပန်းသောအခါ အနားယူရန် ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ ထိုနေရာတွင် အဆင်ပြေ သင့်တော်မည့် ကာလတစ်ခုအထိ စခန်းချ အနားယူရန် ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့ပါသည်။ ထိုကြောင့် လူ တိုင်း အာရ ဝမ်းသာဖြစ်ကာ ထိုနေရာတွင် အနား ယူခဲ့ကြပါသည်။ သို့သော် ထိုနေရာတွင် ရေမရှိ သောကြောင့် အဆင်ပြေ ကောင်းမွန်သည်ဟု မဆိုနိုင်ချေ။ ခေါင်းဆောင်ကြီး မောရှေ အနားယူ စခန်းချရန် ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်သော နေရာမှာ ရေမရှိသောကြောင့် ကောင်းမွန်သည်ဟု မဆိုနိုင်ချေ။ ထိုနေရာမျိုးတွင် စခန်းချ အနားယူရန် ဆုံးဖြတ်သည့် မောရှေကို ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်ဟု ဣသရေလ လူတို့ မသတ်မှတ်ခဲ့ချေ။ ထို့ကြောင့် မောရှေထံ သွားရောက်ကာ အပြစ် တင် ပြောဆိုခဲ့လေသည်။ ထိုအခါ မောရှေက အဘယ်ကြောင့် ငါ့ကို အပြစ်တင် ပြောဆိုပါသနည်း။ အဘယ် ကြောင့် ဘုရားသခင်ကို စုံစမ်းပါသနည်း ဟူ၍ ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်။ လူများက အပြစ်တင် ပြောဆိုခံ ရသည်သာမက ခဲနှင့်ပေါက်ရန် ကြိုးစားသည့် အခြေအနေ အထိရောက်လာသောအခါ မောရှေသည် ဘုရား သခင်ထံ အော်ဟစ်ခဲ့ကြောင်း အခန်းငယ် (၄)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ဘုရားကို ဆန့်ကျင်ဘက်ပြု စုံစမ်းသူများ
ထိုအခါ ဘုရားသခင်က မောရှေအား အသက်ကြီးသူများနှင့် ဣသရေ လူမျိုးများကို ကျောက်တုံး ရှိရာနေရာသို့ ခေါ်ဆောင်သွားပြီး ထိုကျောက်တုံးကို လှံတံနှင့်ရိုက်ရန် မှာကြား ပြောဆို ခဲ့လေသည်။ ထိုသို့ ဘုရားသခင် ပြောသည့်အတိုင်း ပြုလုပ်လိုက်သောအခါ ထိုကျောက်ထဲမှ ရေ ထွက် လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဣသရေလ လူမျိုးများ မျှော်လင့် တောင့်တနေသော ရေကို ရရှိခဲ့လေ သည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်ကို မိတ်ဆွေ ပြန်လည် သုံးသပ်ကြည့်ကြပါစို့။ ဣသရေလ လူမျိုးတို့၏ အမျှော်လင့်ဆုံး အတောင့်တဆုံး ရရှိခဲ့သည့် အတွက် အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့သည် သတ်မှတ် နိုင်သည် မဟုတ်ပါလား။
သို့သော်လည်း သမ္မာကျမ်းစာက ထိုအဖြစ်အပျက်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး ပြောဆိုရာတွင် ဘုရား သခင်၏ စိတ်တော်၌ ကျေနပ်မှု တစ်စုံတစ်ရာ မဖြစ်ခဲ့သည်မို့ ထိုသူတို့၏ အောင်မြင်ခြင်းဟု မသတ် မှတ်နိုင်ချေ။ ထိုနေရာကို သမ္မာ ကျမ်းစာက မဿာနှင့် မေရိဘ ဟု ခေါ်ဆို သမုတ်ခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်း တင် ရေးသားထားပါသည်။ ထိုစကား လုံးများသည် ဟီးဘရူး အခေါ်အဝေါများ ဖြစ်ပြီး မဿာ၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ စုံစမ်းခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ် ရှိပါသည်။ မေရိဘ၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ ဆန့်ကျင်ဘက် ပြုခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ် ရှိပါသည်။ ထိုစကား နှစ်ခုစလုံးမှာ ဘုရားသခင်ကို သာ ဦးတည် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ထိုအဖြစ်အပျက်ကို ပြန်လည် သုံးသပ်ကြည့်ပါ။ ရေဖိဒိမ် အရပ်တွင် ရောက်ရှိလာသည်။ ထိုနေရာတွင် စခန်း ချကြသည်။ ထိုနေရာတွင် သောက်သုံးရေမရှိ၊ အဆင်ပြေသော နေရာမဟုတ်ချေ။ ထိုနေရာတွင် စခန်းချရန် ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည် မည်သူ၏အမှားနည်း။ ထိုအမှားကို အခြေခံကာ တစ် ယောက်ကို တစ်ယောက် အပြစ်တင် ပြောဆိုချင်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ နားလည်သင့်သည်မှာ မည်သူ့ထံမျှ အပြစ်မရှိချေ။ မောရှေတွင် အပြစ်မရှိချေ။ ဘုရားသခင်ကိုလည်း အပြစ်တင်လို့ မရချေ။ ထိုနေရာတွင် ရေမရှိ၊ အဆင်မပြေသော နေရာဖြစ်သော်လည်း မည်သူကိုမျှ အပြစ်တင် ပြောဆို၍ မရချေ။
ကျွန်တော်တုိ့၏ အသက်တာထဲတွင် အဆင်မပြေသောအချိန်၊ အားနည်းသော အချိန်များ တွင် မည်သူ့ကိုမျှ အပြစ်တင် ပြောဆို၍ မရချေ။ မည်သူ့တွင်မျှ အပြစ်မရှိပါ။ ထိုအခြေအနေကို ဘုရား သခင်က လုပ်ဆောင်နေခြင်း ဖြစ်သည် မဟုတ်ပါလား။ အဆင် မပြေသော အခြေအနေ၊ အချိ်န်အခါ မျိုးကိုလည်း ဘုရားသခင် ပြင်ဆင်နေကြောင်း နားလည်ရမည် မဟုတ်ပါလား။ ထိုအခြေအနေကို ဘုရားသခင်ထံမှ ကျွန်ုပ်တို့ ခံယူရမည် ဖြစ်သည်။ ယောသပ်၏ အသက်တာထဲတွင် ညီအကို တော် စပ်သောသူများက သူ့ကို ရေတွင်းထဲမှာ ချသည်။ ရောင်းစားသည်။ ယောသပ်အနေဖြင့် ညီအကို များကို အပြစ်တင်ခွင့် ရှိသည်မဟုတ်ပါလား။ သို့သော် ယောသပ်ကိုယ်တိုင် နားလည်ခဲ့ သည်မှာ ထိုအခြေအနေသည် ညီအကိုများက ပြုလုပ်သည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်က ပြင်ဆင် ဆောင် ရွက် ခဲ့သည်ဟု နားလည်ခဲ့ပါသည်။
ဘုရားပေးသောနာမည်နှင့် လူပေးသော နာမည်
ယနေ့ ကျွန်တော်တို့၏ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို ဘုရားသခင်က နာမည်တစ်ခု ပေးနေပါသည်။ ကျမ်စာထဲတွင် ရေဖိဒိမ် အရပ်တွင် ရေထွက်လာသော အရပ်ကို မဿာနှင့် မေရိဘဟူ၍ အမည် ပေးခဲ့ပါသည်။ မကောင်းသော အဓိပ္ပါယ်နှင့် ထိုနာမည်ကို ပေးခဲ့လေသည်။ “စုံစမ်းခြင်းနှင့် ဆန့်ကျင် ဘက်ပြုခြင်း” ဟု အမည်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်တော်တို့၏ အသက်ရှင် လှုပ်ရှားနေ သည် နေရာ၊ လုပ်ဆောင်သည့် အမှုကို ဘုရားသခင်က နာမည်တစ်ခု ပေးနေပါသည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အသင်းသားများ လုပ်ဆောင်နေသည့်အရာက ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် အမည်သစ်တစ် ခု ကို ရစေပါသည်။ သင်မည်ကဲ့သို့ အသင်းတော်ကို အမည်ပေးနေပါ သနည်း။ ယနေ့ လူများ အမည် ပေး မှည့်ခေါ်ဆိုသော အမည်နှင့် ဘုရားသခင်ပေးသော နာမည်မှာ ကွာခြား နေ ပါ လိမ့်မည်။ ကျမ်းစာ တွင် လူ၏ အမည်မှာ “အာဗြံ” ဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသခင်က “အာဗြဟံ” ဟု နာမည်ပေး မှည့်ခေါ် ခဲ့သည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာတွင် “ရှိမုန်” ကို “ပေတရု” ဟူ၍ လည်းကောင်း အမည်နာမ ပေးမှည့် ခေါ်ခဲ့ ပါသည်။ သင့်ကို ဘုရားသခင်က မည်ကဲ့သို့ နာမည်ပေးမည်ဟု ထင်ပါသနည်း။ သင်၏ တုန့်ပြန်လှုပ် ရှား မှုအပေါ်တွင် မူတည်ကာ ဘုရားသခင်က အမည်ပေး မှည့်ခေါ်လျှက် ရှိပါသည်။
ခရစ်တော်ကို လှံတံနှင့် ရိုက်သောသူများ
အထက်ပါ လေ့လာချက် အရ ဣသရေလ လူမျိုးများသည် အောင်မြင်ခြင်း မရခဲ့ပါ။ ရှုံးနိမ့် ခြင်းကိုသာ ရရှိခဲ့သည် မဟုတ်ပါလော။ ထိုအဖြစ် အပျက်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး ၁ကော ၁၀း၎ တွင် ဖေါ်ပြထားသည်မှာ
“ထိုသူတို့နှင့် အတူလိုက်သော ဓမ္မကျောက်မှ ထွက်သောရေကို သောက်ကြ၏။ ထိုကျောက်ကား ခရစ်တော် ဖြစ်သတည်း။” (၁ကော ၁၀း၎)
ထိုကျမ်းချက်အရ မောရှေလှံတံနှင့် ရိုက်သော ကျောက်မှာ ခရစ်တော် ဖြစ်နေသည်ဟု ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ၀ိညဉ်ရေး ရာ အားနည်းသော အချိန်၊ ယုံကြည်ခြင်း အားနည်းနေသည့် အချိန်များတွင် ခရစ်တော်ကို ရိုက်နှက် နေသူ၊ ကျောက်တုံးဖြင့် ပစ်နေသူများ ဖြစ်နေသည် မဟုတ်ပါလား။ သခင်ယေရှုသည် လက်ဝါးကား တိုင်တွင် အသေခံခဲ့သည်။ လက်ဝါးကားတိုင်းတွင် သေပြီး နောက် ရောမစစ်သားများက သခင်ယေရှု ၏ နံဘေးကို လှံနှင့် ထိုးဖောက်ခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုထံမှ သွေးနှင့် ရေ ထွက်လာခဲ့သည်။ “သွေး” ဆိုသည်မှာ သခင်ယေရှု၏ “ခွင့်လွှတ်ခြင်း”ကို ကိုယ်စားပြုနေပါသည်။ ရေဆိုသည်မှာ သခင်ယေရှု ၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို ကိုယ်စားပြုနေပါသည်။ ထို “ယေရှုခရစ်” ဆိုသော ကျောက်မှ ကောင်းကြီး မင်္ဂလာများ စီးထွက်လာပါသည်။ လူများစွာ ထိုကောင်းကြီး မင်္ဂလာကို ခံစားရပါသည်။ သခင်ယေရှု သည် လူတိုင်းကို ခွင့်လွှတ်ခြင်းသာမက ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုလည်း ခံစားစေပါသည်။ ခရစ် တော်ကို နာကျဉ်စေသော သူတိုင်းကို ဘုရားသခင်က ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့် ကောင်းကြီး မင်္ဂလာများ ကို စီးဆင်းစေပါသည်။
ရှုံးနိမ့်ခြင်းထဲမှ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်
ကျမ်စာထဲတွင် ရေဖိဒိမ်အရပ်ကို မဿာနှင့် မေရိဘ ဟူ၍ ယနေ့တိုင် ခေါ်ဆိုနေကြောင်း ကျမ်းစာက မှတ်တမ်း တင်ထားပါသည်။ သမ္မာကျမ်းမှ ဟေဗြဲကျမ်းတွင် ရေးသားထားသည်မှာ ဣသရေလ လူများကဲ့သို့ မလုပ်နှင့် ဟူ၍ ပြောထားပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်း အားနည်းသော အပြုအမှု လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုံးဝ မလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက် ချရမည်ဖြစ်သည်။ အထက်ပါ အဖြစ်အပျက်သည် ဣသရေလ လူမျိုးတို့၏ ရှုံးနိမ့်ခြင်း အတွေ့အကြုံ ဖြစ်ပြီး၊ ထိုအထဲတွင် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်လည်း ရှိနေကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်တော်တို့ကို အောင်မြင်ခြင်းလည်း ပေးချင်ပါသည်။ ထွက်မြောက်ရာ ၁၇း၈-၁၃ ကို ဆက်လက် ဖတ်ရှုလေ့လာပါက ဣသရေလ လူမျိုးတို့၏ အောင်မြင်ခြင်းကိုလည်း ဆက်လက် သွန်သင်ပေးနေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ထိုရေဖိဒိမ်အရပ်တွင် ရေသောက်ပြီး ဆက် လက် အနားယူနေစဉ် အာလလက် လူမျိုး ရန်သူများ ရောက်ရှိလာပြီး ဣသရေလ လူများကို ရန် ဘက် ပြု စစ်တိုက်လေတော့သည်။ မောရှေနှင့် ယောရှုသည် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး ယောရှုမှာ ရန်သူ များ ကို တိုက်ခိုက်ရာတွင် ဦးဆောင်ရပြီး မောရှေမှာမူ အာရုန်နှင့် ဟုရကို ခေါ်ဆောင်ကာ တောင်ပေါ် တွင် ဆုတောင်းပေးခြင်း အမှုကို ပြုရလေသည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဣသရေလ လူမျိုးများ အောင်မြင်မှု ရရှိသွားခဲ့လေသည်။
ဤအဖြစ်အပျက်မှာ အသင်းတော်နှင့် အလွန်ကိုက်ညီသော အဖြစ်အပျက် ဖြစ်ပါသည်။ မောရှေသည် တောင်ပေါ်တွင် ဆုတောင်းရပြီး ယောရှု ဦး ​ဆောင်သော သူများမှာ စစ်ပွဲတွင် ပါဝင်ရသည် အာရုန်နှင့် ဟုရမှာ မောရှေကို အကူအညီပေးရသည်။ မောရှေသည် လက်ကို မြှောက်ပြီး ဆုတောင်း ချိန်တွင် စစ်ပွဲမှာ အနိုင်ရသည်။ မောရှေ လက်ကို ချသောအခါ စစ်ပွဲ ရှုံးနိမ့်ရသည်။ သင်ကိုယ်တိုင် လက်ကို မြှောက်ကြည့်ပါ။ မည်မျှကြာအောင် မြှောက်နိုင်သနည်း။ လက်ထဲတွင် လှံတန်ကို ကိုင်ထားရသောကြောင့် ပိုမို ခက်ခဲမည်ဟု ထင်ပါသည်။ ယောရှုသည် မောရှည်ကိုလည်း မနာလို မဖြစ်ခဲ့ပါ။ အာရုန် နှင့် ဟုရကိုလည်း မနာလို မဖြစ်ခဲ့ပါ။ မိမိလုပ်ဆောင် ရသည့် အလုပ်ကိုသာ မညည်းတွားဘဲ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရပါသည်။
အသင်းတော်အတွက် အလွန်ကောင်းသော ပုံဥပမာ တစ်ခု ဖြစ်သည် မဟုတ်ပါလား။ မိမိ တာဝန် ဘာဖြစ် သည်ကို လူတိုင်း သိဘို့ လိုအပ်ပါသည်။ မိမိ လုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားကို ကျေပွန်ဘို့ လိုအပ်ပါ သည်။ ထိုစစ်ပွဲတွင် မပါဝင်နိုင်သော မိန်းမနှင့် ကလေးများက ချက်ပြုတ်မည်။ လူမမာများကို ပြုစုမည်။ ဒါဏ်ရာ ရသူများကို ကြည့်ရှုမည်။ အစရှိသဖြင့် တာဝန် အသီးသီး ရှိကြသည် မဟုတ်ပါလား။ မည်သူ့ကိုမျှ ငြူစူခြင်း၊ မနာလိုခြင်း မရှိခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဣသရေလလူမျိုးတို့ အောင်မြင်ခြင်း ရရှိခဲ့သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အောင်မြင်ရန်အတွက် ဆုတောင်း ခြင်းသည် အလွန် အရေးကြီးပါသည်။ မောရှေ ဆုတောင်းခြင်း ပျက်ကွက်သည့် ခဏမှာ အရှုံးနှင့် ရင်ဆိုင်ရပြီး၊ ပြန်လည်ဆုတောင်းနိုင်သည့် ခဏမှာ အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့ပါသည်။ အသင်းတော် အ တွက် ထိုအဖြစ်အပျက်မှာ ပုံသက်သေ နမူကောင်း တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
ငိုကြွေးရာအရပ်ကို စမ်းရေထွက်ရာအရပ် ဖြစ်စေသူ
ကိုယ်တော်ကို အားပြုသောသူသည် မင်္ဂလာ ရှိပါ၏။ ထိုသို့သော သူတို့သည် လမ်းခရီး တော်တို့ကို နှလုံးသွင်း တတ်ကြပါ၏။ သူတို့သည် ဗာကာလွင်ပြင်၌ ရှောက်သွားစဉ်၊ ထိုလွင်ပြင်ကို စမ်းရေထွက်ရာ အရပ်ဖြစ်စေကြ ပါ၏။ အရင်မိုးရေလည်း မင်္ဂလာများနှင့် လွှမ်းစေပါ၏။ (ဆာလံ ၈၄း၅-၆)
အထက်ပါ ကျမ်းချက်ကို လေ့လာကြည့်ပါက “ဗာကာ” ဟူသော လွင်ပြင်အရပ်ကို တွေ့ရပါ သည်။ ထိုနာမည်မှာ “ငိုကြွေးခြင်း” ဟု အမည်ရှိပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ယုံကြည်သူများတွင် အားနည်းခြင်း၊ ငိုကြွေးရခြင်းတို့ ရှိနိုင်သော အချိန်ကာလတစ်ရပ် ရှိပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဆာလံဆရာက ဘုရားကို အားကိုးခြင်းဖြင့် “စမ်းရေ ထွက်ရာအရပ်” ဖြစ်စေကြသည် ဟု ဆိုထားပါသည်။ ဘုရား သခင်ကို အားကိုးခြင်း၊ ယုံကြည်ခြင်းတို့ဖြင့် “ငိုကြွေးရာအရပ်” ကို “စမ်းရေထွက်ရာအရပ်” ဟု အမည် သစ်ကို ဖြစ်စေခဲ့သည်။ သင်၏ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သင်၏ ငိုကြွေးရာ အရပ်ကို အမည်သစ် တစ်ခု ပေးဘို့ ဆုတောင်းကြပါဟု တိုက်တွန်းဝေငှလိုပါသည်။ အာမင်
← မှတ်တမ်းတင်ရမည့် သမ္မာကျမ်းစာမှ မိခင်များ
သမ္မာကျမ်းစာ Software →
One comment on “အောင်မြင်ခြင်း နှင့် ရှုံးနိမ့်ခြင်း”
lun on 21/05/2013 at 11:14 PM said: